Umshayeli Courier: incazelo umsebenzi kanye nokubuyekeza ukuzibonakalisa
Isikhundla "umshayeli-courier" namuhla ngokuvamile zingatholakala emaphephandabeni kumawebhusayithi enikelwe search emisebenzi. Lokhu akusona isimanga, ngoba isikhathi sethu olufanele kakhulu umbuzo yezokuthutha izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba izimpahla, impahla kanye izibambiso. Sinikeza namuhla silazi kangcono kulowo mkhakha, ukuze baqonde lokho, impela, waziphatha courier umshayeli futhi kanjani umsebenzi.
Uma thina ukuchaza umsebenzi ngamafuphi, singasho ukuthi umshayeli-courier - isisebenzi waziphatha wezimpahla kwezidingo ekhelini. Kulokhu, umsebenzi wayo ukuba asuse izimpahla noma amadokhumenti ukuthutha ukuba ukuphela kwabo e esikhathini esifishane futhi, ukuthola nesignesha isiqinisekiso umamukeli kwezidingo, ukuya ukuletha nezinye imithwalo. Kumele kuqapheleke futhi ukuthi lezi ochwepheshe bakwati kwetfula kancane ngosuku kuze oda ezimbalwa kweshumi.
Izimfuneko abafundela isikhundla
Ukunikeza kafushane ufunde mayelana nezimfuno eyisisekelo esenziwe izinkampani Abafakizicelo imisebenzi Courier umshayeli. Lomuntfu lesi sikhundla kumele baholwe kahle emzini, lapho uzosebenza, ngoba uma umuntu uzochitha isikhathi esiningi kuyadingeka ukumthola ikheli, kuzoba nomthelela omubi kakhulu isibalo ukudiliva ukuthi bazocula emini. Ngaphezu kwalokho, ukugxila indawo enhle, umshayeli lingabizwa uhlele umzila wabo, okuzokwenza ukufeza oda ngaphezulu. Yiqiniso, abaqashi ezimweni eziningi bezicelo asenesikhathi eside wawuhlala edolobhaneni, okuyinto yenziwa umsebenzi.
Umshayeli-courier futhi ukuba umuntu onokwethenjelwa futhi abathembekileyo ziyogcina ukuthi ubumfihlo banoma ukuthuthwa kwezimpahla (tibalo lemali, amadokhumenti nokunye. N.). Uma ukulethwa sihlelelwe ezinye izinto zenani elikhulu, kungenzeka umqashi kuzodinga ikhandidethi esikhundleni sokuba isitifiketi kungekho nerekhodi lobugebengu.
tikhundla isicelo umshayeli-courier kumele zihluke ukufika ngesikhathi, nokuhlanzeka kanye ibhizinisi. Ngakho, kufanele ngokushesha ngangokunokwenzeka ukwazi ukubhekana ngokuphumelelayo nazo zonke izinkinga ezingase ezenzeka phakathi zokuthutha. Ngaphezu kwalokho, ehambisa unesibopho ukuphepha izimpahla ezithunyelwe, yena kumele iphathwe ngokucophelela futhi lona lapho uya khona ngokuphepha. Ukunakwa kudinga wamaphepha ukuthutha nokwamukela kwezimpahla.
Incazelo umsebenzi umshayeli-courier
Labor umsebenzi abasebenzi kule ndawo ibuswa incazelo umsebenzi. Lo mbhalo uchaza imisebenzi, namalungelo kanye nemithwalo yemfanelo esindayo umshayeli-courier. Sinikeza esikhulumi ukwenaba la maphuzu.
Umsebenzi oyinhloko ukuze kwenziwe ngumsebenzi kulo mkhakha kuyinto ukulethwa izincwadi, amaphakheji, amaphepha abalulekile, kanye izimpahla ezithile (ngokuvamile usayizi encane) esokuba ekhelini ecacisiwe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Lapho ukulethwa izimpahla zithunyelwe ehambisa ukuzizuzela isiginesha umamukeli.
Imisebenzi amalungu umsebenzi
Kuye izici inkampani BUTHA imisebenzi umshayeli-courier ingase ihluke kancane. Nokho, ezimweni eziningi, zihlanganisa izinto ezilandelayo:
Thola izabelo kumqashi for the kwezidingo noma kokuthola izibambiso, amaphakheji, amaphasela, izimpahla kanye nezinye izinhlobo wezimpahla.
Iminingwane yokuthi indawo esiqondile izindawo, umzila yezokuthutha wezimpahla nokudidiyela isikhathi esiqondile sihambise kumamukeli ngamunye.
Gada ukutholakala amaphepha adingekayo ukuze umthwalo. Uma kudingeka, ukuthola ukugunyazwa esifike ukuthutha iziqondiso.
Yenza zonke imisebenzi ngesikhathi. Uma kungenakwenzeka ukuba bafeze lo noma ukulethwa kuyadingeka ukuze ngokushesha wazise abaphathi bakhe izizathu ukubambezeleka.
Ngomusa futhi ngokucophelela ukusingatha umthwalo.
Nsuku zonke noma masonto onke ukunikeza umbiko inqubekelaphambili ngqo isiKhulu noma umnyango izisebenzi.
Salary, impendulo ku
Umshayeli Courier namuhla kuwumsebenzi ethandwa kakhulu. Nokho, ngenxa yokuthi ukuthi umsebenzi onjalo Akudingi ziqu (ngaphandle ukushayela isipiliyoni kanye ilayisense yokushayela), asikwazi babhekwa ikhokhwe. Namuhla, ezikhathini eziningi, izinkampani ezidinga umshayeli-courier nge imoto siqu, njengoba ngasizathu simbe, ukwakha izimoto zawo siqu ngabo ezingenanzuzo. izicelo ezinjalo bangalindela ezingeni eliphakeme inkokhelo. Kwezinye izinkampani it is offset (ezinye ezingeni) nokugcinwa imoto. Ngakho, uma une imoto siqu, ningaqiniseka ukuthi inkokhelo-oda 800-1000 zamadola. Ngaphandle imoto emholweni wakho besilinganiso kuka-400 no-600 zamaRandi. Yiqiniso, lezi zibalo akuzona sokugcina futhi ingase yehluke kuye ngesistimu esifundeni yokuhlala kanye nenkampani.
Ngokuqondene amazwana mayelana yakhe umsebenzi-courier abashayeli, iningi amalungu umsebenzi ukuthola umsebenzi wabo nzima impela. Lokhu kungenxa isidingo njalo ukuhamba kuleli dolobha, ngokuvamile ukuba nezinsuku ozinikeziwe.
Job Description uSuperintendent. Job Description: Ukwakhiwa site uSuperintendent
Umsebenzi ethandwa kakhulu esikhathini esizayo esiseduze
Lomsebenzi Abesilisa: uhlu. imisebenzi Iduna nensikazi
Diver - lena kwalomsebenti. Izingubo nokokusebenza diver
Amahhotela eshibhile e Samara: ikheli, incazelo. Ihostela e Samara
Murtazaliyev Sagid Magomedovich: Biography, umndeni, umsebenzi
Hydrogen peroxide engadini yemifino ingadi - izici isicelo kanye nokubuyekeza
Ummese ayohlola - ibhalansi esiphelele lobuhle, amandla izici ewusizo
Acclimatization womuntu ezinkangala. Indlela ukudambisa acclimatization ezinkangala
Gasket ngoba esiqandisini gum: izici Ukukhetha futhi esikhundleni
Blueberry pie e multivarka: iresiphi